Hutsva hweBhutan - hukama hweIsrael
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bhutan Breaking Nhau » Hutsva hweBhutan - hukama hweIsrael
Bhutan Breaking Nhau • Hurumende Nhau • Israel Breaking News • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
bhutan mureza pixabay
Rudzi rudiki rweSouth Asia runongova nehukama hwehukama pamwe nenhamba shoma yenyika uye kuyera kubudirira kwayo kunoenderana nerunyararo rwenyika
Israel neMugovera yakazivisa kuti yaumba hukama hwekudyidzana neBhutan, nyika yechishanu yekuzviita mumwedzi ichangopfuura pamwe neUnited Arab Emirates, Bahrain, Sudan neMorocco. Asi Bhutan haisi nyika yeArabhu, uye vanhu vazhinji vakanzwa nhau nezvechibvumirano chakajairika vangangodaro vakazvibvunza kuti, "Chii chinonzi Bhutan?"
Mumiriri weIsrael kuIndia Ron Malka uye Mumiriri weBhutan kuIndia Vetsop Namgyel vakasaina chibvumirano chekumisikidza neMugovera manheru. Kusainwa kwechibvumirano kwakauya mushure mekutaurirana muchivande pakati pevakuru kubva kunyika dzese, kusanganisira kushanyirana, mumakore achangopfuura kutanga hukama hwezvematongerwo enyika, sekureva kwebazi rezvekunze, iro rakaratidza kuti rinoshanda neBhutan kuburikidza neMashav Division, Agency for International Development. Kubatana. Kubudikidza neizvi, vadzidzi vanobva kuBhutan vauya kuIsrael kunowana dzidziso yekurima.
Sekureva kwechibvumirano chakabatana pamusoro pechibvumirano ichi, nyika idzi dzakaronga kudyidzana mukusimudzira hupfumi, hunyanzvi hwekuita uye kurima. Yakati zvakare kuchinjana kwetsika uye kushanya kucha "kuwedzera."
"Chibvumirano ichi chichavhura mimwe mikana yakawanda yekushandira pamwe kuti vanhu vedu vese vabatsirwe," akadaro Malka.
Nyika yeSouth Asia yeBhutan, inozivikanwa se "Nyika YeTinhira Dhiragoni," inyika diki yakavharirwa iri kumucheto kwekumabvazuva kweHimalaya. Yakaganhurirwa neTibet kuchamhembe uye India kumaodzanyemba uye ine huwandu hwevanhu vari pasi pe800,000. Guta rayo guru uye rakakura ndiro Thimphu. Nharaunda yenyika iyi makiromita mazana masere nemazana masere nemazana matatu nemakumi matatu nemana nemakumi matatu neshanu nemazana mana emakiromita, zvichiita kuti ive saizi yenyika yeUS Maryland.
chitendero chepamutemo cheBhutan iVajrayana Buddhism, inoitwa kusvika kumatatu echina evagari venyika. Imwe chikamu chechina chevanhu vanoita chiHindu. Rusununguko rwechitendero runovimbiswa uye kutendeutsa kunorambidzwa nemutemo wehurumende yeumambo.
Bhutan yakava monarchy monarchy pavakaita sarudzo yavo yekutanga mu2008. Izvo zvisati zvaitika, yaive humambo hwakakwana. Zita ramambo ramambo ndiDragoni King.
Nyika ine hukama hwepamutemo hwekudyidzana nenyika makumi mashanu neshanu chete, uye ikave nhengo yeUnited Nations muna 53. United States neUnited Kingdom, semuenzaniso, zviri pakati penyika dzisina hukama hwepamutemo neBhutan. Nyika ine mamishinari mune manomwe chete eaya nyika makumi mashanu nematatu, uye chete India, Bangladesh neKuwait vane mamishinari muBhutan. Dzimwe nyika dzinochengetedza kusangana zvisina kurongeka nevekudyidzana kuburikidza nevamiriri vavo munyika dziri pedyo. Internet neterevhizheni zvaingobvumidzwa kupinda munyika kutanga muna 1971.
Bhutan inochengetedza hwakasimba hupfumi, hunyanzvi, uye hukama hwemauto neIndia, uye ine hukama hwakasimba mune zvematongerwo enyika nehukama neBangladesh. Kunze kwayo kukuru isimba remagetsi emagetsi kuIndia. Nyika yakavharwa kune vekunze kunyanya kubva kunze kweSouth Asia, senzira yekuchengetedza tsika yenyika uye kuchengetedza zviwanikwa. Kunyangwe nyika ichiganhurira kushanya, vagari veIndia neBhutanese vanogona kuenda kune mumwe nemumwe nyika vasina pasipoti kana vhiza. Bhutan yakavhara muganho wayo neChina yaive padyo mushure meChina 1959 yekupinda kweTibet
Mutauro wepamutemo wenyika ndiDzongkha, unozivikanwawo seBhutanese, unova mumwe wemitauro makumi mashanu nematatu echiTibeti unotaurwa muCentral Asia. Chirungu, zvisinei, ndiwo mutauro wekurairidza muzvikoro muBhutan.
Bhutan inozivikanwa senyika inofara kwazvo pasirese uye, zvechokwadi, kuyera nyika neGross National Happiness Index yakagadzwa mu2008 nehurumende yeBhutan mubumbiro rayo uye inoverengerwa seyakatopfuura pamusoro pegirosari yezvipfuyo munyika. Izvi zvinonzwisisika, sezvo Bhutan iri imwe yenyika dzine hurombo pasi rose, ine huwandu hwehurombo hwe12 muzana.
Kune vekudyira pakati pedu, Bhutan ine zvimwe zvayo zvechinyakare madhishi. Iyo yakakurudzirwa yenyika dhishi inonzi inonzi Ema Datshi, mubatanidzwa wechili nechizi. Zvimwe zvekudya zvechinyakare zvinosanganisira Jasha Maroo, kana Maru, inova huku inonaka, uye Phaksha Paa, kana nyama yenguruve ine chili dzvuku.
Kunyange Bhutan ichizivikanwa senzvimbo yakachengetedzeka uye humbavha husingawanzoitika, Lonely Planet inoti kune njodzi nekutsamwiswa kwekutarisira, kusanganisira: imbwa dzemumigwagwa dzinopa ruzha rukuru husiku uye chimbwamupengo chine njodzi; migwagwa yakaoma uye ine mavhiri; MaIndia akaparadzanisa mapoka anoshanda kuyambuka muganho kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBhutan; uye mvura, gore, chando uye matombo anogona kukanganisa kufamba nemugwagwa uye nendege.
Bhutan inozivikanwa nemamonasteries ayo, nhare - dzinozivikanwa sezongs - uye inoshamisa nzvimbo. Vashanyi vanofanirwa kunge vari vashanyi pane zvakarongwa, zvakabhadharwa, kutungamirirwa, kana vashanyi vehurumende. Ivo vanogona zvakare kupinda munyika semushanyi we "mugari wevamwe vamire" kana nesangano rekuzvipira.
by MARCY OSTER, ZVINOKOSHA ZVEMAEDHIA